Qore: Yasin abdi Jama (Yasin Garad)
Mahad Illaah baa leh, nabad galyo iyo naxariisu Nebi Muxamed(CSW) korkiisa ha ahaato
Ayaamuhu xasarad badanaa
Taariikhduna xanuun badanaa.
Waxaa layiri nin Soomaali ah ayaa isku subax wuxuu aasey oo ciidda ku wada rogey aabihiis iyo wiilkiisii curadka ahaa. Subaxaasu wuxuu noqdey kii ninkaas ugu naxdin iyo murugo badnaa intii uu noolaa. Ninkii oo murugeysan ayaa wuxuu yiri oraahdan:
“Aboow malaga yaabaa inaan subax saaka ka dambaysa naxo”. Wuxuu u qaatey in wixii naxdin iyo murogo la oran jiray ka dhamaadeen
Meesha ninku joogaa waa miyi, wuxuu dhar iyo hanti haystaana waa iska yaryihiin. Waxaa layiri markuu qabrigii aabihiis iyo curadkiisii kasoo dul dhaqaaqey ayaa maradii ama macawistii uu xirnaa waxaa ka qabsadey geed oo gees ilaa gees jeexay(dilaacshey). Hadda ninkanu waa kii lahaa “Aboow Malaga yaabaa inaan subax dambe oo saaka ka dambaysa naxo”
Ninkii wuxuu ka naxay sida macawistiisii u dilaacdey, markaasuu anta madaxa gacmaha saartey wuxuu yiri “Haheey tanina ma ii laabnayd”
Waxaan sheekadan u soo qaatay waxaan noolaa oo goob joog ahaa ummadda Soomaaliyeed oo Qaran ah oo laga haybaysto oo ayadu u dooda xuquuqda ummaddaha la dulminayo. Idaacadahana laga qaado “Boortaqiis ma mariyeen Angoola, South Africa ma moogi”. Waxaan xasuustaa oo goob joog ahaa bur-burkii iyo dhibkii ku dhacay ummaddan iyo sidey cadawgeed ugu jabtey. Bur-burkaas markaan ka fakaro waxaan is weydiiyaa su’aasha ah malaga yaabaa in ummaddanu kasoo kabato dhibkii gaaray oo mardambe cagaheeda ku istaagto?
Su’aashaas jawaabteeda markaan ka fakaro waxaa ii soo baxda in ay adagtahay in ummaddaanu soo ceshato qaranimadeedii iyo sharafteedii ka luntay laakiin ay sahlantahay inay dabar go’do ama dulinimo ku noolaato.
Ummadi markay kufto ama jabto kama soo kabato dhibkaas gaaray hadii aan lahelin arimaan hoos ku xusan:
(1) in ummadda dareenkeedu is badalo oo ay garato meesha dhibku uga yimid iyo dhibka ku dhacay wuxuu yahay. Garashadaas waxay sababaysaa in ummadu ka leexato dariiqii u horseedey burburka. Dawadani waa mid aan Soomaali wali ku guuleysan inay hesho waxayna wali ku taagantahay dariiqii ay markii horaba keenay bur-burkeeda.
(2) in ummaddu leedahay walaal diineed oo la qaybsada dhibka ku dhacay kadibna gacan qabta oo wax u badbaadiya. Waxaa taariikhdu na baraysaa ummaddo badan oo anta bur-bur lugaha lagaley ay bad baadiyeen ummado diin ahaan ugu damqaday. Tana iska illoow oo waa arin aan Soomaali horay u soo marin mustaqbalkana la filayn.
(3) In ummaddu leedahay saaxiib siyaasadeed(political friend) oo looga haybaysto ama looga baqo. Ummadaha ama dawladaha aduunka in badan oo kamida malaha tabar iyo xoog looga haybaysto, laakiin waxay leeyihiin ama ku tiirsanyihiin saaxiibo iyo dawlado kale oo lagu tixgaliyo ama dartood looga baqo. Arintanina waa mid aysan ummadda Soomaaliyeed waligeed ku guuleysan marka laga reebo xiligii yaraa ee ay dawladii kacaanku gacan saarka layeelatay Midowgii Soofiyeed(Soviet Union).
(4) In ummaddu leedahay daris wanaagsan oo aan jabkeeda ku farxayn ama bur-burkeeda ka qayb qaadan. Waxaa jira ummado sida Soomaaliya oo kale u bur-buray laakiin ku bad baaday dariskooda dartiis. Tusaale ahaan wadanka Afgaanistaan waxaa ku dhacay burbur la mid ah kan Soomaaliya ku dhacay, laakiin waxaa gacan qabtay walaalahooda reer Pakistan. Soomaaliya walaalka kaliya ee ay Bariga Africa ku leedahay waa Jabuuti ayana waxay dawladeedu siyaasad ahaan taageertaa wixii Itoobiya Soomaaliya ka rabto. Dariska Soomaaliya intiisa kalana waa kuwii dhigey meesha ay maanta Soomaali taalo mana ogolaan doonaan inay dib dambe madaxa ula soo kacdo.
Markaan arimahan aan kor ku soo sheegey fiiriyo ama ka fakaro waxaa ii cadaata in Soomaaligu uu halis uyahay inuu dabar go’o oo ay adagtahay inuu ka badbaado godka uu ku dhacay.
Waxaan is weydiiyaa mar hadii dalkii iyo dawladnimadiiba sidaas nagu dhaafeen oo faraheena ka baxeen maxay micno samaynaysaa in wax kale laga hadlo oo Baddu ku jirto. Soo dalka iyo dawladnimadu kama qiima badna wixii kale ee kasoo haray oo ay Baddu ku jirto. Hadana waa meeshii ninkii wiilkiisa iyo aabihiis aasey ka yiri markii macawistu ka dilaacday tana ma ii laabneyd oo maalin kasta waxaad maqlaysaa waxyaabo murugo iyo qalbi dilaac kuu keena.
Waxaan xasuustaa ayadoo Soomaaliya schoolka naloo ku dhigo xiligii iyo qaabkii loo qaatey Soomaali Galbeed iyo NFD iyo sidii Ingiriisku u siiyey dhulalkaas Kenya iyo Itoobiya. xiligaas markii taariikhdaas naloo sheego waxaan eedeyn jirney urururadii gobonimodoonka Soomaaliyeed oo xiligaas joogay iyo guud ahaan dadkii Soomaaliyeed ee markaas noolaa oo waxaan dhihi jirney Doqomo ayagoo nool oo taagan baa dhulkoodii cadawgu qaatay.
Soomaalidu waxay ku maah maahdaa “ Hadal gefa (laqwi) Illaahay waa kaa yeersiiyaa laakiin kaagama haro” Anagii Soomaalidii hore eedayn jirnay baa maanta dhulkeenii horteena lagu boobayaa oo hadana aanaan lahayn cod iyo tabar midna aan uga ceshano cadawga boobaya.
Waxaa xiligan kawaanka saaran Badweynta Soomaaliya oo layiri waxaa lagu samaynayaa xadeyn cusub, waxaana cabirkeeda ama xadka Badda Soomaaliya laga soo reebayaa 12 NM. 188 NM oo kalana waxaa laga dhigayaa economic zone iyo wax dunidu u simantahay oo ayna Soomali cidna ka xigin.
Badweynta Hindiya waxaan ku leeyahay geesiyaashii Soomaaliyeed ee ku difaaci jiray oo soo iibin jiray Maraakiibta Gujiskaa iyo doonyaha dheereeya oo lagugu waar diyeeyo hortaa ayay dhinteen oo ciida galeen. Wiilashii inay ku difaacaan loo tababaray oo tuutaha dartaa ugu labisnaan jiray magoocoodana la oran jiray Raxan majoogaan oo qaarna waa dhinteen qaarna waa kaa fogaadeen. Hadaad moodey in Aden C/lle Cismaan, C/rashiid Cali Sharmaarke iyo Maxamed Siyaad Bare noolyihiin oo aan agtaada cidi qori ka jabsan karina waad riyoonaysaa oo kuwaasi mar hore ayey ciida ka hoos mareen waxaana kuu soo haray kuwa hada ku xaraashaya ee taa ogsoonoow.
Hadaba yaa ku difaacin oo aad u ooyin, ma waxaa ku difaacaya Cali Mahdi oo asagoo sheeganaya Madaxweyne iyo Nuur Cilmi Cismaan oo ahaa wasiirkiisii caafimaadka oo maalintii Dawladii Soomaaliya dhacdey anta labadii Company ee laga kala lahaa Italia iyo Swizz oo midkood magaciisa la oran jiray Expresso anta ka qaatay lacag lagu sheegey 80 Million oo Dollar u saxiixay in lagugu shubo haraadiga suntan Nukleerka (Nuclear Toxic). Sida ay cadaysay United Nation Environmental Protection (UNEP).
Mise waxaa ku difaacin Shariif Xassan oo asagoo sheeganaya Af-hayeenka Baarlamaanka Soomaaliyeed, Kenya ku tiri waxaan Canshuur idin kaga qaadeynaa Soomaalida kunool Kenya ee in Badda Soomaaliya xadeyn cusub lagu sameeyo ogolaada yeelay oo raali ku soo noqdey arintaas. Mise mawaxaa ku difaacin Omar C/Rashiid Cali Sharmaarke oo asagoo sheeganaya Raysal wasaare Soomaaliyeed anta bilaabay bixintaada iyo Murankaaga kadib markii shacabka Soomaaliyeed ku kaceen London kayiri arinta Badda waa nala ku qayaamay. Mawaxaa ku difaacin C/raxmaan C/shakuur oo anta qalinka kugu duugay oo anta dalka Kenya kugu saxiixay Warbaahinta ka yiri anigaa sharci yaqaan ah oo inaan Badda saxiixo waa sax dadka qayl qaylinayaana(Buuqayana) waxba makala oga.
Mise waxaa ku difaacaya Pro Ibbi oo asagoo sheeganaya wasiirka Baddaha Soomaaliya anta warbaahinta soo istaagey yiri Kenya waxay cabiratay qayb Badda Soomaaliya kamid ah oo waxay UN ta u gudbisatay cabir qaloocan oo uu ku jiro qayb Badda Soomaaliya kamid ah, hadana arintaas difaacay oo yiri inaan aqbalno cabirkaas waa sax waayo waxaan ahay nin karti iyo aqoon leh waxaana bad baadinayaa badda Soomaaliya.
Mise waxaa ku difaacin Shiikh Shariif Sh. Axmed oo asagoo sheeganaya Madaxweyne Soomaaliyeed markii lagu yiri Baddii Soomaaliya waa laqaatey ku jawaabay “Aa been iyo borobagaando dawladeyda lagu ridayo”. Kadibna anta Kampala tagey soo saxiixay wax lagu magacaabo Kampla Accord oo ay ku qorantahay Baarlamaanku mooshin ama dacwo kama keeni karo xukuumada mudo hal sano ah. Malaha u jeedada Kampala Accord waxay ahayd in halka sono gudihiisa lagu saxiixdo Badda Soomaaliya.
Mise waxaa ku difaacin Cabdi Wali Gaas oo asagoo sheeganaya Raysal wasaare Soomaaliyeed isla mar ahaataana sheeganaya aqoonyahan haysta Phd anta Xamar ku qabtay wax lagu magacaabay Shir dib u heshiineed ka soo saaray qoraal loo bixiyey Road Map oo Af-Ingiriis ku qoran oo ay qodobadiisa ka midtahay (I) (EEZ declared by 19 December 2011). Micnuhu waa Soomaaliya waxay ku dhawaaqidoontaa Bisha December 19, 2011 xuduuda Badda Soomaaliya. Sidii in aysan xad lahayn hadda ka hor oo uu asagu ugu horeeyo qof xad u sameeya. Kadibna asagoo qudbad kajeedinaya UN ta ku cel celiyey “waan fulinayaa, waan meel marinayaa Road Map kii kasoo baxay Shirkii dib u heshiisiinta Muqdisho”
Bal waxaad is weydiisaa hadii aad tahay qofka Soomaaligaa ee qoraalkan aqrinaya sababta ay shir dib u heshiineed oo Soomaali looqabtay uga soo baxday qodob ku saabsan xuduuda Badda. Shirku ma wuxuu ka dhexeeyey 2 wadan oo isku haysata Bad, mise Qabiilo Soomaaliyeed oo Badda wada leh, bal xagee iska soo galeen shirka Xamar lagu qabtay iyo xadaynta Baddu?.
Cabdi Wali Gaas markuu UN ta ka qodbeeyey kadib asagoo jooga wadanka Maraykanka gobolka Virginia ayaa muwaadin Soomaaliya weydiiyye sababta keeney in dawladiisu Badda Soomaaliya xaduudeeda muran galiso? Wuxuu ku jawaabay “Hadaan sheegano 200 mile waxaan galeynaa Jidda” Soomaalidu waxay ku maah maahdaa ruuxii aragiisu ku deeqo ayaa oontiisu ku deeqdaa. Wallee nimankan hadalkooda iyo aragoodu waa isku egyahay. Hadaba Indian Ocean yaad u qayla dhaansan tola’ay waa ku qabataaye
Gabyaagii Soomaaliyeed Gaariye gabay uu diriyey mudo hore ayaa mirhiisa waxaa kamid ahaa “dharaar baa iman doonta Mujrim ooga madoow Islaam sheeganayaa agablaay hambadaada isa sii kaba raacsho”
Sayid Maxamed C/Xassan oo u jawaabayey kuwo ku farxay jabkii daraawiish jabtay markii Ingiriisku Diyaaradahii Royal Guard ku duqeeyey ayaa wuxuu yiri
Waa niman Illahay dirayoo doorshayoo rogaye,
waa niman dolool loo qalbiga daabac kaga yaale,
Dib wixii u dhicin waa waxaan doc ka rahaynee
Indian Ocean kuwa ku xaraashaa waxay lamidyihiin kuwaas uu Sayid Maxamed C/xassan tilmaamayo taariikh iyo dib wixii u dhicina waxba kama garanayaa. Waa kuwo Illaahay dhuuxooda dhareer u badaley, dhiigoodana dhoobo iyo xinjiro u badaley. Waa kuwo aan Illahay uga baryeyno inuu Dhulka korkiisa ku fadeexeeyo hoostiisana ku ciqaabo
Gabyaagii Soomaaliyeed Axmed Dirir gabay uu tiriyey baa mirihiisa waxaa kamid ahaa
“Ilaan waxaa ooyda gabar aabe leh oo ehel u muuqdaaye agab li’idu waa waxa cidlada loogu awdaley”
Indian Ocean kuwii ku difaaci lahaa waa kuwa ku bixinaya, bixintaadana qiilka iyo xujada u raadinaya. Gabyaa Soomaaliyeed oo magaciisa la oran jiray Jaamac Orshe ayaa waxaa la diley nin uu aad u jeclaa, asagoo cabiraya ciilkii iyo murugadii haleeshey ayuu gabay wuxuu ku yiri “Ilmeeyayey sidii agoon nin u itaal sheegtey”
Indian Ocean waxaad noqotay agoon aabaheed dhintay waxaana kuu itaal sheegtay kuwii canshuurtaada iyo kaluunkaaga ku koray, abaal gud kaaguna wuxuu noqday in ay maalina Sunta Nukleerka kugu shubaan maalina ku xaraashaan. Indean Ocean rag malihid laakiin Rabi baad leedahay ee u dulqaado xaraashka iyo Sunta Nuclear waayo hadaad leedahay rag dartood lagaaga baqo sidaas laguuma galeen. Laga yaabe inuu Illaahay kuu soo saaro geesiyaal kaa difaaca doqomada ku xaraashaya.
Baaq ku socda Baarlamaanka
In kastoo magaca Baarlamaan uu yahay magac qurux badan markii kor laga eego laakiin ay balaayo hoostiisa iyo dhexdiisa fadhido oo ay ku jiraan kuwii gabdhaha Soomaaliyeed kufsan jiray, kuwii shacabka Soomaaliyeed Isbaarada u dhigan jiray, kuwii anta Itoobiya soo hor orda ku xasuuqi jiray dadka Soomaaliyeed iyo dalkoodaba. Hadana Soomaalidu waxay ku maah maahdaa “Madax muuqda iyo Midi Saawir ah midna lagama samro” Waxaan la hadlayaa wixii damiir iyo dadnimo ku hartey ee ku jira meeshaas.
Waxaan leeyahay waxaad tihiin kuwa ayagoo taagan maalin kasta ummadda Soomaaliyeed loola bareerayo wax taariikhda iyo dadnimada ku fool xun. Waxaad tihiin kuwo aan taariikh fiican ku lahayn ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda. maanta waxaan idinka codsanayaa inaad ka hortagtaan dhaca loogeysanayo hantida ummadda Soomaaliyeed. Hadii aydaan waxba ka qaban karin waxaan idinka codsanayaa inaad meesha isaga tagtaan oo aydaan ogolaan in hortiina lagu qaato Badda Soomaaliya. War hooy gabyaa Soomaaliyeed ayaa wuxuu yiri “Quruumaha dambaa kugu nacalada ficilka qaarkiis” war hooy hadooranina in taariikhdu idin nacalado. Warhooy yey idinla weynaan shilimada laydin siiyo ee fiiriya waxa dalkiina iyo dadkiina lagu samaynayo.
Baaq ku wajahan Shacabka Soomaaliyeed .
Shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay ogaadaan nimanka dhulkooda xaraashayaa in aysan ahayn muwaadiniin Soomaaliyeed oo damiir iyo Diin midna leh ee ay yihiin duli caooshood u shaqaystayaal uu cadawga ummadda Soomaaliyeed ku adeegto. Shacabka Soomaaliyeed waxaad ogaataan in kastoo aan maanta dabar daranahay waxaad iska qabateen oo dhulka dhigteen kuwa dhulkiina xaraashaya kuwo ka xoog badnaa, kana hub iyo ciidamo badnaa. Waxaad tihiin shacabkii dhulka dhigey qab qablayaashii iyo dagaal oogayaashii dadka iyo dalka Soomaaliyeed duleeyey.Waa in loo midoobaa layskana qabtaa damiir iyo diin laawayaasha ku hoos dhuumanaya magaca Soomaaliyeed ee aan astaahilin inay huwanaadaan magacaas.
Baaq ku wajahan culumadda Soomaaliyeed .
Culimada Soomaaliyeed waxaan leeyahay taariikhda Soomaaliya waxaad ku dhex leedahiin taariikh qurux badan iyo mid fool xun intaba. Waxaa idin kamid ahaan jiray kuwo u halgamay oo nafdoodii iyo maalkoodii u bixin jiray ummaddan wanaageeda. Waxaa idin kamida kuwo runta iyo xaqa aan cidkale darteed uga gaban. Waxaa idin kamida kuwo taageera cadawga iyo gumaystuhu wuxuu wato. Hadaad maanta ka aamustaan oo aydaan ummadda Soomaaliyeed u cadayn waxa ay falayaan nimankan qaarkiin leeyahay waa dawlad Islaam ah oo shareeco qaadatay. ogaada waxaad taariikhda ku yeelan doontaan magac xun oo aan hari doonin. Culumada Soomaaliyeed waxaad hormuud ka ahaydeen dadkii bur-buriyey ama dadka ku kiciyey dawladii Soomaaliya. Waxaan xasuustaa culumo faagaarayaasha ka oran jiray dawlada Soomaaliya waa gaalo diinta ka baxdey in la adeecaana ma banaana. Daliilka iyo xujada ay culumadaas ku doodi jireen waxay ahayd dawladu waxay laysay wadaado, Kitaabka Quraankaana waa ku jees jeestay. Haddii arintaas daacad idinka ahayd kuwa maanta dawlada sheeganayaa Diinta islaamka waa ku jees jeesaan oo maalina waxay dhahaan shareecada Islaamka ayaan qaadanay, maalina waxay dhahaan shareecada aan qaadanay maaha mida lugaha iyo gacmaha jarta. Mar waxay dhahaan shareecada ayaan qaadanay marna waxay dhahaan 4.5 ayaa kitaab noo ah oo aan aaminsanahay. Haddii dawladii Soomaaliyeed lagu haystay 10 wadaad ayey dishey kuwaanu waxay dadka Soomaaliyeed u laayaan boqol boqol iyo kun kun ayagoo waliba u adeegsanaya shisheeye. Hadana waxay xaraashayaan hantidii ummadda Soomaaliyeed. Hadii waxaad dawladii Soomaaliyeed ku haysateed run idinka ahayd waa inaad maantay Fadwo kasoo saartaan in aan nimankan la adeeci karin, Muslimiina ayna ahayn. Hadii kale culumo nimadiina waxaa saaran calaamad su’aal? taariikhdiinana waxaa ku taal bar madoow oo aan ka go’i doonin.
Baaq ku socda Aqoonyahanka Soomaaliyeed
Aqoonyahanka Soomaaliyeed ee wadanimada iyo damiirka leh waxaan leeyahay, waa in aan arintan laga aamusin lana fiirsan ee laga kacaa loona istaagaa sidii dhulkan looga celin lahaa dugaagaan bililiqada ku wada. Waa in ummadda Soomaaliyeed loo cadeeyaa waxa dadkaanu samaynayaan.
Waxaa amaan iyo xusid mudan shiqsiyaadka Soomaaliyeed ee waqtigoodii iyo cilmigoodii u huray difaaca Badda Soomaaliyeed. Gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa Generaal Faarax Qare oo aan ka abaal dhicin shacabka Soomaaliyeed ee uu canshuurtoodii wax ku bartey oo uu qaatey go’aan geesinimo leh. Asagoo ka gil gishey boobka lagu hayo Badda Soomaaliyeed isna hortaagey intii tabartiis ah boobka lagula kacayo Badda Soomaaliyeed.
Illaahoow waxaad tahay Illaaha dunida maamula oo aan cid kale la maamulin. Illaahoow waxaad tahay Illaaha og waxa mustaqbalka dhici doona. Illaahoow haday dhimantahay in maalin maalmaha kamida Soomaali cagaheeda ku istaagi doonto oo ay gaari doonto inay cadawgeeda la xisaabtanto, calooshood u shaqaystayaasha dhulkeeda xaraashayana cadaalada hor keeni doonto. Ilaahow maalintaas soo dadaji oo nagaarsii anagoo nool. Allaahu ma aamin, Allaahu ma aamiin, Allaahu ma aamiin.